Okumele kwenziwe uhulumeni wasekhaya | Local Government Action
Uhulumeni wasekhaya ungolunye lwezinhlaka ezintathu zikahulumeni eNingizimu Afrika. Lezi ezinye ezimbili uhulumeni wesifundazwe nohulumeni kazwelonke.
Isigaba 152 seSahluko 7 soMthethosisekelo sichaza amajoka nemisebenzi kahulumeni wasekhaya:
Ukuqinisekisa uhulumeni wentandoyeningi futhi ophendulayo
Ukugqugquzela intuthuko yomphakathi neyomnotho.
Uhulumeni wasekhaya unamandla okusungula nokuphoqelela imithetho njengoba kuchaziwe kusigaba 156 soMthethosisekelo. Ngokomthetho umasipala uphoqelekile ukuthi uhlinzeke ngezidingo. Umsebenzi oseqhulwini kuhulumeni wasekhaya ubandakanya ukuhlinzeka ngezidingongqangi ezinjengalezi:
amanzi nokuthuthwa kwendle
imisebenzi yezempilo kamasipala
ezokuthutha umphakathi zikamasipala
Eminye imisebenzi ibandakanya ukucisha umlilo, amapaki nezokungcebeleka, imigwaqo kanye nokuthuthwa komphakathi, ukulawulwa kokunakekelwa kwabantwana kanye nezindawo zomphakathi. Uhulumeni wasekhaya kumele ubambe iqhaza ekuhlinzekeni ngezindlu.
UHULUMENI WASEKHAYA KUMELE... abeke phambili izidingongqangi zomphakathi. Lokhu kuchaza ukuthi kumele:
Uhulumeni wasekhaya kumele aqinisekise ukuthi ilungu lomphakathi ngalinye likwazi ukuthola okungenani izidingongqangi eziyisisekelo (isigaba 139(5) soMthethosisekelo; isigaba 73(1) soMthetho weziNhlaka zaMasipala).
Ukugqugquzela intuthuko kanye nezendawo
Uhulumeni wasekhaya kumele ugqugquzele indawo ephaphile nenempilo, kanye nentuthuko yomphakathi nezomnotho.
Ukugqugquzela ukuzibandakanya komphakathi
Uhulumeni wasekhaya kumele ugqugquzele ukuzibandakanya komphakathi ezindabeni zikahulumeni wasekhaya. Lokhu kuchaza ukuthi akumele ugcine ngokubonisana nomphakathi, kodwa uphinde uwuvumele futhi ugqugquzele nokuthi umphakathi uzibandakanye ekuthathweni kwezinqumo.
Ukuhlonipha, ukuvikela, ukugqugquzela nokwanelisa amalungelo abantu
Uhulumeni wasekhaya kumele ahloniphe, avikele, agqugquzele futhi wanelise amalungelo abantu (isigaba 7(2) soMthethosisekelo), okufana nelungelo lokuthola amanzi, indawo ehlanzekile nenempilo, kanye nezindlu. Kuchaza ukuthini lokhu?
Ukuhlonipha kuchaza ukuthi akumele uthiye ukugcwaliseka kwelungelo – njengokugunyaza ilayisense yokuvumela umphakathi ukuthi umbe umthombo wamanzi okuphuza.
Ukuvikela kuchaza ukuthi akumele uvumele abanye ukuthi babukele phansi ukugcwaliseka kwelungelo – njengokuvumela izinkampani ukuthi zingcolise amanzi okuphuza.
Ukugqugquzela kuchaza ukuthi kumele ulawule ukugcwaliseka kwelungelo – njengokugcina nokulungisa amapayipi adingekayo ukuze kuhlinzekwe ngamanzi okuphuza kanye nokuthuthwa kwendle.
Ukwanelisa kuchaza ukuthatha izinyathelo ezifanele zokuqinisekisa ukuthi umphakathi uthola amanzi okuphuza angambi eqolo, ahlanzekile, njengokuqalisa ukuhlinzeka ngezidingo eziyisisekelo zamahhala nangokwakha ingqalasizinda ukuze kutholakale izidingo..
Ukugcwalisa amalungelo abantu isigaba nesigaba
UMthethosisekelo uyazisa ukuthi uhulumeni ngeke alungise zonke izinkinga ngokuphazima kweso. Kodwa uma sekubhekwa udaba lokungalingani kokutholakala kwezindlu ezifanele, amanzi, ukuthuthwa kwendle, ukudla, indawo ehlanzekile, nokunakekelwa kwezempilo uhulumeni kumele athathe igxathu elibheke phambili, hhayi emuva.
Okumele kwenziwe uhulumeni ukusungula uhlelo ukuze kugcwaliseke amalungelo ngokusebenzisa izinsiza ezikhona, nokuthi uhlelo lulandelwe isigaba nesigaba ukuze abantu bathokozele amalungelo abo. Uma uhulumeni uhluleka ukusungula uhlelo, noma ushiya abantu abasengcupheni ungabafaki ohlelweni, noma ngokuhamba kwesikhathi uyeke ukusebenzisa uhlelo olwenzile, lokhulu kuwukuphula amalungelo abantu.
Izibopho zamalungelo abantu azisebenzi ekuphathweni kukahulumeni wasekhaya kuphela, kodwa kunoma ubani okuhulumeni wasekhaya oqashelwe ukuhlinzeka ngezidingo emphakathini, isibonelo, izinkampani eziphethwe umasipala ezifana ne-Johannesburg Water, kanye nezinkampani zikahulumeni ezifana no-Eskom, izinkampani ezizimele kanye nama-CBOs.
Khumbula: UMthethosisekelo uwona mthetho ongaphezu kwayo yonke ezweni.
Uhulumeni wasekhaya kumele ubeke izidingongqangi zomphakathi eqhulwni (isigaba 153(a) soMthethosisekelo).